ဒုတိယဝန်ကြီး – လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျွန်မတို့ရဲ့ မူဝါဒဟာ ပြည်သူအားလုံး ရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှု ကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ လေးစားအသိအမှတ်ပြုရန် နှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ ဖြစ်ရမယ်။
မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် ကျေးရွာနှင့် မြို့ငယ်တစ်ခုတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ နော်ထူးဖော၊ ၃၇ နှစ် သည် နေရပ်စွန့်ခွာရသည့် ဒုက္ခသည်များနှင့် အရပ်သားတို.၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တိကျစွာ နားလည်ပြီး ဖြေရှင်းကူညီပေးနိုင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ငယ်စဥ်ဘဝကပင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ခံစားခဲ့ရသူလည်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို သူမ အခြေခံပညာ သင်ကြား တတ်မြောက်ခဲ့ရာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ရှိ ကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ကျေးရွာများ၌ ခံစားခဲ့ရသည်။
နော်ထူးဖောသည် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို.နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှ အခြေခံပညာသင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင် Selkirk College ၌ ပညာသင်ယူနေစဉ် ကာလအတွင်း Peace and Human Rights ဆု ကို ရရှိခဲ့သည်။ သူမ၏ မိခင်နိုင်ငံ တွင် တရားမျှတရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှု များ အတွက် ဝါရှင်တန် ဒီစီ အခြေစိုက် Peace and Justice Studies Association မှ Next Generation Peacemaker အဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ နော်ထူးဖောသည် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာ သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Master of Arts in Human Security and Peacebuilding ဘွဲ. ကို Royal Roads University မှ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWO) သို. အဖွဲ.ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ထူးဖောသည် အမျိုးသမီးများအဖွဲ.ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) (WLB) တွင် KWO ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း နိုင်ငံတကာရှိ လူအခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသမီး စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စရပ်များတွင်း ထင်ရှားသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နော်ထူးဖောသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ.များ၏ အကြီးတန်း ကိုယ်စားလှယ်အား ထောက်ပံ့ပေးရသည့် နည်းပညာအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့နှင့်အတူ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုင့်ဂျာရန် တွင်ပြုလုပ်သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ.များ၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသို. တက်ရောက်ခဲ့သည်။ နော်ထူးဖောသည် ကရင်ပြည်နယ် အခြေခံဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီနှင့် ဖယ်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲရေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် နော်ထူးဖောသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် ဒုတိယဝန်ကြီး အဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး နော်ထူးဖော၏ (၇၅)နှစ်ပြည့် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အထိမ်းအမှတ် ပြောစကား